Xog Cilmi Nafsi Ah: Qofka Markay Maalmuhu Isgaga Qasmaan Dhibaatada Maskaxeed Ee Uu Dareemo Qalinkii: phoilisoph dulqarnayn Axmed Cumar | Gabiley News Online
Xog Cilmi Nafsi Ah: Qofka Markay Maalmuhu Isgaga Qasmaan Dhibaatada Maskaxeed Ee Uu Dareemo Qalinkii: phoilisoph dulqarnayn Axmed Cumar
Cilmi baadhis lagu sameeyey qaarka mid ah dalalka caalamka, ayaa lagu ogaaday in dad lakulma cidhiidhiga nafsaaniga ah iyo niyad jabka badan ay yihiin kuwa ugu tiradaban guudahaan dadka kale marka loo eego.
dadka dhibaatooyinka maskaxeed dareema waxay kuwaa bariistaan ayaamaha khalkhal maskaxeed.
xeel dheera yaasha diraasadan diyaariyey waxay sheegeen in dadka diiqada ku seexdaa ay khalkhal maskaxeed iyo ilaw badan lakulmaan, waxana intabadan lagu arkaa xanuunka keena lumista macluumaada maskaxda sida uu sheegay..
Dadka cidhiidhiga iyo cadaadis badan lakulmaa maaha khalkhal maskaxeed oo qudha,waxa udheer isbadalka ku yimaada nidaamka shaqada ee maskaxda iyo waliba qofkoo shaqadiisa afgaran waayo.
dadka lakulma niyad jabka ayaamaha noloshooda marka dadka caadiga ah loo eego ay yihiin kuwo kaduwan halisna ugu jiraan xanuunka lumiya xasuusta ilaa qofku daqiiqadiiba wax ilaawo.
maskaxda oo qofka maydhanta waxaanu ilaawaa dhamaan wixii uu yaqaanay, taas oo keenta qofka oo cadaadis lakulma.
Ugu dambeyntii Xogtan Cilmi Nafsiga ahi waxay inta ku daraysa qofka hadii maskaxda laga cadaadiyo waxa dhibaato gaadhaa maskaxda qayba uqaabilsan ka jawaabida dhibaaatada iyo qofka uu haysto mashquul aanu garanayn meel uu ka yimid.
Qalinkii: Aqoonyahan Dulqarnayn Axmed Cumar oo Bartay Cilmiga Saykolojiga